Lalao Ravalomanana : Tsy ataony ambanin-javatra mihitsy ny fiangonana – MyDago.com aime Madagascar
Nanome voninahitra ny fankalazana ny faha-15 taonan’ny synodam-paritany Iarivo Avaradrano Lalao Ravalomanana omaly Sabotsy . Niara-dia taminy ny vadin’ny filohan’ny FJKM Rasendrahasina Zoe. Amin’ny maha-vadin’ny filoha mpanampy azy dia manana andraikitra lehibe ao anatin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara Ravalomanana Lalao. Ny fitandremana Jerosalema Vaovao Belanitra Ilafy no nandray ity fivoriam-be voalohany sady ivon’ny fankalazana ho an’ny synodam-parintany Iarivo Avaradrano ity. Nankasitrahin’ny mpampiantrano ny fahafoizan-tenan’ny vadin’ny filoha sy ny vadin’ny filoha mpanampy ao amin’ny FJKM niombona tamin’izao fotoam-bavaka lehibe izao. Araka nambaran’ny prezida synodaly dia 45 tamin’ny 120 tafo no efa nahefa ny anjara adidiny amin’ny fazahoana ilay fiara tsy mataho-dalana, tsangam-baton’ny fankalazana ny faha-15 taonan’ny synodam-parintany. Hatreto aloha dia maherin’ny 32 tapitrisa Ariary ny vola voaangona ary mbola mitohy ny ezaka mandrapaha-tongan’ny 14 novambra datin’ny fivoriam-be faharoa sady hanolorana ny tsangam-bato.
Auteur Solo Razafy*Publié le 12 mai 2013 12 mai 2013 Catégories Politique
9 pensées sur “Lalao Ravalomanana : Tsy ataony ambanin-javatra mihitsy ny fiangonana”
Fa tsy foana akory ny fikelezanareo aina.Fitaovana mahomby no sady azo antoka Andriamanitra; Tsy mbola misy maty antoka izay rehetra miantso ny anarany
Tsy fitaovaona izany Andriamanitra.Izy no nahary izao rehetra izao. Ka noho izany tsy fitaovana velively Izy. Misy diso kely izany fiteny izany.
Toky sy antoka Izy ary Mpamonjy tsy mahafohy izay miantso ny Anarany sady manao ny Sitrapony.
Tsara izany rahafa mahay manaja an’Andriamanitra. Ny zava-dehibe dia ny fanajana, na olona, na kolotsaina , na finoan’olona samihafa… Ny mba tiako ho lazaina eto dia tsara ny fivavahana fa ny ilaintsika izao dia ny mammetrka olona any @ bireom-pifidianana manerana ny nosy, mifidy olona hanara-maso ny CES sy n:y CENIT, , mametraka ny rafitra ahafahana manantateraka ny fampielazan-kevitra, fa mbola maro @ Malagasy no tsy mahalala ny hoe Lalao Rakotonirainy, . Maika dia maika ihany koa ny femtrahana ireo rafitra entina hifidy sy entina miaro ny mpifaninantsika. Tsy sarotra @ fahavalo ny hamingana ny mpifaniantsika, ilay Ny Rado izao efa ho samborina sahady, . Hoy i Dada t@ sabotsy teo hoe « hamoronana antsanga tsy aman’orana » mba hanakanana ny antsika. ka mba fiangaviana ny ahy. Tsy mino mihitsy aho hoe tsy mahalala an’A/tra ny Malagasy, nefa toy izany ihany aloha nho asesika, efa resy lahatra ny maro fa mba hadao @ izay hiasa e. Ny sasayn efa mangalatra fiangana manao fampielezan-kevitra sahady, ny sasany dia mitady ny hamingana antsika. Aoka hiatrika asa @ izay.
ireo fitsidihana fiangonana ataon’ny Lalao Ravalomanana ireo anie ka ilaina na dia mba ahitan’ny olona azy fotsiny. izy akory tsy hoe nanao tori-teny, tahakan’ny sasany eto, fa MANAJA ka tonga manohina. Raha ny @ lafiny fiangonana dia tsara doa tsara ny ataon’i Lalao Ravalomanana. Asa raha ho afaka tonga any ambanivolo any izy fa maro koa ny fiangonanana any @ ireny toerana any ambany ravi-kazo ireny.
Tadidio fa isika tsy manana Radio na televisiona hanamparitaha ny hevitsika. Ka dia aza diso ady atao.
Marina ny an’i Lazalazao. Aoka samy hanao izay azontsika hatao isika amin’ny fahavononana.
Ny Radio sy ny Télé hatreto mbola tsy azontsika hidirana. Ny fanehana mamangy ny fiangonana kosa tsy misy ny maharatsy an’izany. Nefa averiko, ny fanarahana an’Andriamanitra dia ny fanaovana ny sitrapony. Tsy sitrapon’Andrimanitra mihitsy izao loza manjo ny firenena izao. Tsy afaka ny manavotra antsika nefe izy raha tsy manao ny sitrapony amin’ny fomba rehetra isika. Ny fanaovana ny sitrapny voalohany indrindra dia ny fanaovana ny marina sy mahitsy. Raha vao manao ny marina sy mahitsy isika dia ho reraka foana eo ny fahavalo. Izay no mahatonga ny teny hoe: ny marina tsy mba maty.
13 mai 2013 à 7 h 27 min
Tsotra ny tiako ho lazaina
Marina ny an’i Lazalazao sy Izy
Fanompoana an ‘Andriamanitra no lalàna tsara indrindra amintsika olombelona, very raha tsy misy Azy.
anefa izao : ho Filohampirenena no tanjona ho an’i Mme Ravalomanana fa tsy hanao pasitera.
Mora dia mora no miafona ambadikiny Fiangonana. OLona madio akanjo sy mihaja daholo sady » acquis à la cause « .
Ny hilain ‘ Andriamnaitra dia tahaka ry Abrahama, Josoa, Gideona, Davida, Solomona sy ireo ehetra natsoiny dia olona sady matahotra Azy, miaraka Aminy, anefa MIASA KOA. Niosina, nitarika ady, nitarika vahoaka marobe, isan’karazany
Maninona raha dia efa maka « contact amin ‘ireo vahoaka mijaly, mahantra eny ambanin’ny tanana, nandalovany cyclone, ireto mpivarotra marobe manenika ny arabe, ny vahoaka naona … tsy vaotanisa intsony. Na hoe tsy hanao propagande aza, fa mandalo, na dia mikopakopa tanana fotsiny aza ( sao dia henjehiny sasany eo indray), mba ho hitan ‘olona fa eny, mijery azy.
Sosokk’hevitra ihany aloha io
13 mai 2013 à 7 h 40 min
Tsapa fa ireo candidat izay mihevitra handany vola be amin’ny fampielezan-kevitra dia ho foana sy ho ringana avokoa satria matoky ny volany – fa apetraka amin’Andriamanitra ihany ny fandehan-javatra rehetra tahaka ny fivavahana izay ataon-dRamatoa Lalao Ravalomanana eraky ny fiangonana, satria fantany fa Andriamanitra no Lohan-daharana hanatanteraka ny zava-drehetra eto an-tany. ary izay ihany no làlana tokony aleha. « Ny Fitokiana an’Andriamanitra »
Tsara io hevitr’i Avo lenta io fa tokony ho raisina
Précédent Article précédent : RAVALOMANANA MARC : « Tsy hanala ny maha-kandidà an’i Neny isika »
Suivant Article suivant : Lettre ouverte à la SADC et à la Communauté Internationale – Laissez les Malagasy choisir leur Président